Baahin: Sabti, Jul 09, Weriye Adam Shardi ~ Daljir ~ Bossaso. Sahan biyeed cilmiyaysan oo ka bilawday degmooyinka gobolka Bari; Rasaas lagu furay markab dagaal oo laga leeyahay Britain oo doonayey in uu ku soo xirto marsada Laas qoray; Gaadiidka dadweynaha ee magaalada Garowe oo shaqo joojin sameeyey, kuna sababeeyey sare u kac qiime shidaal; Wafti ka socda dawlada Puntland oo ku sugan Ufayn; Somali lagu laayey dalka Zambia; Gargaar loo fidinayo dadka ay abaartu saameeyeen oo ka bilawday Muqdisho. – Radio Daljir
Baahin: Sabti, Jul 09, Weriye Adam Shardi ~ Daljir ~ Bossaso. Sahan biyeed cilmiyaysan oo ka bilawday degmooyinka gobolka Bari; Rasaas lagu furay markab dagaal oo laga leeyahay Britain oo doonayey in uu ku soo xirto marsada Laas qoray; Gaadiidka dadweynaha ee magaalada Garowe oo shaqo joojin sameeyey, kuna sababeeyey sare u kac qiime shidaal; Wafti ka socda dawlada Puntland oo ku sugan Ufayn; Somali lagu laayey dalka Zambia; Gargaar loo fidinayo dadka ay abaartu saameeyeen oo ka bilawday Muqdisho.